Fisokafan'i Etazonia: Ilaina ny fanaovana vaksiny feno ary fitsapana COVID-19 ratsy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Fisokafan'i Etazonia: Ilaina ny fanaovana vaksiny feno ary fitsapana COVID-19 ratsy
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Fisokafan'i Etazonia: Ilaina ny fanaovana vaksiny feno ary fitsapana COVID-19 ratsy.
Nanambara ny fitantanan'i Biden fa i Etazonia dia "hiala amin'ny fameperana isam-pirenena izay nampiharina teo aloha" ary handray politika "izay miantehitra indrindra amin'ny vaksiny hampandrosoana ny fiverenana azo antoka amin'ny fitsangatsanganana an'habakabaka iraisam-pirenena" any Etazonia.
Ny fameperana fitsangatsanganana amerikana, napetraka tamin'ny martsa 2020 ary nohavaozin'i Biden tamin'ny fiandohan'ity taona ity, dia hesorina ao anatin'ny roa herinandro.
Ny fameperana mivoaka dia hosoloina fameperana vaovao misy ny satan'ny vaksiny sy ny fanaraha-maso ny fifandraisana.
Ny vaksiny ekena dia izay ankatoavin'ny US Food and Drug Administration na ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ihany.
Ny Trano Fotsy dia nanambara fa ireo mpitsidika iraisam-pirenena miditra ao amin'ny US amin'ny fanokafana indray ny firenena amin'ny 8 Novambra dia tsy maintsy manolotra porofo momba ny vaksiny feno sy vokatra ratsy amin'ny fitiliana COVID-19 rehefa tonga.
Tao anatin'ny fanambarana iray navoaka androany, nanambara i Biden Administration fa ny Etazonia dia "hiala amin'ny fameperana isan-pirenena izay nampiharina teo aloha" ary handray ny politika "izay miantehitra indrindra amin'ny vaksiny mba hampandrosoana ny fiverenana azo antoka amin'ny dia an'habakabaka iraisam-pirenena" any Etazonia.
Ny fameperana fitsangatsanganana amerikana COVID-19, navoaka tamin'ny martsa 2020 ary nohavaozina tamin'ny fiandohan'ity taona ity, dia hesorina ao anatin'ny tapa-bolana, saingy hosoloina fameperana vaovao misy ny sata fanaovana vaksiny sy ny fanaraha-maso ny fifandraisana.